Sawiro ” Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday Maqaayada The Village ee Magaalada Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sawiro ” Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday Maqaayada The Village ee Magaalada Muqdisho
Nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa saakay gudaha u galay Maqaayada The Village ee kutaala dhismaha Guriga Hooyooyinka ee Degmada Xamar Weyne, weerarkaasi ayaa waxaa ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay labo qof uu ku jiro ninkii waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa ku dhintay qaraxaasi ismiidaaminta ahaa, waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay labo qof kale oo kamid ahaa dadkii ku sugnaa Maqaayada The Village.
Wariyaal ku sugnaa Maqaayada weerarka ismiidaaminta lagu qaaday ayaa sheegay in ay ka shakiyeen ninkan waxyaavaha qarxa ku xirnaa kadibna ay goobta ka carareen, waxaana xiligaa kadib meesha isku qarxiyay ninkii mineesnaa.
Ciidamada amaanka Dowlada Soomaaliya ayaa qaraxa kadb goobta xiray , waxa ayna halkaasi ka sameeyeen baaritanao ay ku ogaanayeen shaqsiga weerarka fuliyay iyo waliba qaabkii uu kusoo galay maqaayada.
Weerarkan ismiidaaminta ah ee maanta lagu qaaday Maqaayada The Village ee kutaala Guriga Hooyooyinka ee Degmada Xamar Weyne ayaa noqonaya weerarkii sadaxaad ee maqaayadaasi lagu qaaday, waxaana weeraradii hore lagu dilay Wariyaal iyo dad kale oo u badnaa shacab maqaayada ku sugnaa.